Ndị na-emepụta igwe na-ekekọta & ndị na-ebunye - Ụlọ ọrụ na-ejikọta China
TBT 50-5F Ellipse Binding Machine(PUR) Servo moto
TBT50/5F Ellipse na-ejikọta igwe bụ igwe na-ejikọta ọtụtụ ọrụ nwere teknụzụ dị elu na narị afọ nke 21.Ọ nwere ike mado akwụkwọ mpempe akwụkwọ na gauze. Ma nwekwara ike iji maka ịrapara nnukwu size cover na mean-time ma ọ bụ na-eji naanị. The Interchange n'etiti EVA na PUR s nnọọ ngwa ngwa.
TBT50/5E Ellipse ejikọta igwe bụ igwe na-ejikọta ọtụtụ ọrụ yana teknụzụ dị elu na narị afọ nke 21.Ọ nwere ike mado akwụkwọ mpempe akwụkwọ na gauze. Ma nwekwara ike iji maka ịrapara nnukwu size cover na mean-time ma ọ bụ na-eji naanị. The Interchange n'etiti EVA na PUR s nnọọ ngwa ngwa.
Spiral ejikọta igwe SSB420
Akwụkwọ ndetu spiral binding machine SSB420 eji maka igwe na-emechi emechi, igwe nchara gburugburu bụ usoro njikọ ọzọ maka akwụkwọ ndetu, na-ewu ewu maka ahịa.Tulee eriri eriri abụọ, ọ na-echekwa ihe, dị ka naanị otu eriri igwe, nakwa akwụkwọ ejiri otu waya kechie anya ọzọ pụrụ iche.
Akpaaka waya ma ọ bụ igwe na-ekekọta PBW580S
PBW580s ụdị igwe gụnyere akụkụ nri akwụkwọ, akụkụ ọkpọ ọkpọ, akụkụ nri mkpuchi nke abụọ na akụkụ waya o njikọ.Mee ka arụmọrụ gị dịkwuo elu iji mepụta akwụkwọ ndetu waya na kalenda waya, igwe zuru oke na-eme ngwa ahịa waya.
Igwe eji ejikọta spiral akpaaka PBS 420
Spiral akpaka ejikọta igwe PBS 420 bụ igwe zuru oke ejiri maka ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ na-emepụta otu akwụkwọ ndetu waya.Ọ na-agụnye akụkụ nri akwụkwọ, akụkụ ọkpọ ọkpọ, spiral forming, spiral bonding and scissor locking part with book anakọta akụkụ.
Sistemụ Njikọ Ọsọ Ọsọ dị elu nke Cambridge-12000 (Akara zuru ezu)
Sistemụ Binding Cambridge12000 bụ ihe ọhụrụ ọhụrụ nke JMD nke ụwa na-eduga ngwọta njikọ zuru oke maka oke mmepụta.Nke a dị elu arụmọrụ zuru oke njide akara atụmatụ na pụtara njikọ mma, ngwa ngwa ọsọ na elu ogo nke akpaaka, nke na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka nnukwu obibi obibi akwụkwọ ka mma mmepụta arụmọrụ na ala mmepụta na-eri.♦Mmepụta dị elu: Enwere ike ime ngwa ngwa mmepụta akwụkwọ ruo 10,000 akwụkwọ / awa, nke na-abawanye ụbara net ...
Ihe Nlereanya igwe: Challenger-5000 Ahịrị ejikọta zuru oke (akara zuru oke)
Ihe Nlereanya igwe: Challenger-5000 zuru oke ahịrị ejikọta (Ahịrị zuru oke) Ihe Nhazi ọkọlọtọ Q'ty a.G460P/12Stations Gatherer Gụnyere ọdụ nnọkọ iri na abụọ, ebe a na-enye nri aka, nnyefe obe na ọnụ ụzọ jụrụ maka mbinye aka na-ezighi ezi.1 Tọọ b.Challenger-5000 Binder gụnyere panel njikwa ihuenyo mmetụ, akwụkwọ 15 clamps, ọdụ igwe igwe 2, ebe a na-emegharị ọkpụkpụ azụ na ọdụ gluing akụkụ, ọdụ nri mkpuchi iyi, ọdụ nipping na ...